गीता केसी प्रकरण : श्रीमानलाई अस्पताल जान्छु भनेर भतिजसँग घुम्न जंगलतिर ! « Etajakhabar
गीता केसी प्रकरण : श्रीमानलाई अस्पताल जान्छु भनेर भतिजसँग घुम्न जंगलतिर !
प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७७, आईतवार ०८:२३
काठमाण्डौ – पछिल्लो समय सामान्य म’नमु’टा’व तथा लेनदेनसहित अ’वैध स’म्ब’न्धका कारण हुने वि’वा’दले ‘ह ‘त्याको रूप लिन थालेको छ । यस्ता घ’टनामा परिवारसँग जोडिएका व्यक्ति, आफन्त र चिनजानका व्यक्ति तथा सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान भएर प्रेम सम्बन्धमा गाँ’सि’एकासमेत पर्न थालेका छन् ।
यस्तै, अ’वैध स’म्ब’न्ध र लेनदेनका कारण गत शुक्रबार ललितपुरमा आफ्नै परिवारभित्र यस्तै घटना भएको छ । भैँसेपाटी बस्दै आएकी ३९ वर्षीया गीता केसीको ज्या’न लि’एको आरोपमा उनका भतिजा निर्मल केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अ’वैध स’म्बन्ध र लेनदेनका कारण भएको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकोलेको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार आफ्नै काकी पर्ने गीतासँग निर्मलको अ’वैध स’म्बन्ध रहेको खुलेको छ । निर्मल र गीताबीच आर्थिक लेनदेनसमेत रहेको पाइएको छ । श्रीमान्सँग स’म्बन्ध राम्रो नभएपछि गीता र निर्मलबीच हि’मचिम बढेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउँछ ।
केसी परिवारले गीता ह’राएको भन्दै गत बुधबार महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा उ’जुरी दिएपछि प्रहरीले खोजीका क्रममा उनको ‘श’व शुक्रबार साँझ गोदावरी नगरपालिका–१० लेलेको जंगलमा फे’ला पारेको थियो ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार गीताको ‘ज्या’न लि’नुको का’रण ले’नदेनको विषयपछि उब्जिएको वि’वा’द हुन सक्ने देखिएको छ । सो क्रममा वि’वाद उ’ब्जिए’पछि घाँ ‘टी थि ‘चेर गीताको गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
यस्तै, गत २५ साउन राति गोंगबुमा कृष्णबहादुर बोहोराको अ’वैध स’म्बन्ध तथा अर्थिक लेनदेनकै कारण क्रू”र तथा घटना भएको थियो । एकातिर ‘ श’वका ‘टु ‘क्रा सु’टकेस र जे’ब्रा झो’लामा हा’लेर फ्याँ’कि’एको थियो ।
घटनामा संलग्न व्यक्ति श’व फा’लिएको स्थान नजिकै बस्थिन् । प्रहरीको बलियो अनुसन्धानले घटनाको दोस्रो दिनमै प’क्राउ गर्न सफल भयो । घटनामा संलग्न कल्पना मुडभरी पौडेललाई प्रहरीले चितवनबाट प’क्राउ गरेपछि अ’वैध स’म्ब’न्ध र आर्थिक ले’नदेन नै घ’टनाको कारण रहेको पुष्टि भएको थियो ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका एसएसपी दीपक थापाले अ’वैध स’म्बन्ध अरूले थाहा नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले तथा तत्कालको रि’स र आ’वेगलाई मा’निसले नि’यन्त्रण गर्न नसक्दा घ’टना हुने गरेको देखिएको बताए ।
‘मानिस अ’वैध स’म्ब’न्ध अरूले थाहा नपाऊन् भन्ने चाहन्छ, सम्बन्धका कुरा बाहिर जाने डरले यस्ता घटना भएको पाइएको छ । सामान्य वि’वा’दमा तत्कालको रि’स र आ’वेगलाई क’न्ट्रोल गर्न नसक्दा पनि यस्ता घ’टना भएका छन्,’ महाशाखाका प्रमुख एसएसपी थापाले राजधानीसँग भने ।
गत बिहीबार राति धादिङमा आ’वेगकै कारण ६५ वर्षीय सोमबहादुर गुरुङको क्रू’रता’पूर्व’क ज्या’न गएको थियो । धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका–१३ खलचेतका २६ वर्षीय राजु परियारले क्रू”रतापू’र्वक ज्या”न लिए ।
परियार ज्या’न लि’एपछि बिहीबार राति १ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा गुरुङको टा ‘उको झो’लामा हा”लेर ‘आ’त्मस’मर्प’ण गर्न पुगेका थिए । उनले आफूले मा’न्छे ‘मा”’रेर आएको भन्दै ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई झो’लाबाट ‘टा’उको नि’कालेर देखाइदिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुखसमेत रहेका एसपी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार सामान्य वि’वादका कार’ण भएको देखिएको छ ।
यसैगरी, गत मंगलबार झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा समेत लेनदेनकै कारण २८ वर्षीय गोमानसिंह मगरको वी’ भत्स तरिकाबाट ज्या’न ग’एको थियो ।
स्थानीय मनकुमार लिम्बुले मगरलाई बोलाएर शिवसताक्षी बजारमा भेटेपछि दुवै जना रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जंगलतिर गएको र सोही क्रममा लेनदेनको विषयमा वि’वाद हुँदा ज्या’न लिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरू दुवै जना बहराइनबाट केही समयअघि नेपाल आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
‘विदेशमा दुवै जना सँगै बसेर आएका रहेछन् । उनीहरूबीच लेनदेनको सम्बन्धका कारण ज्या’न लि’एको देखियो,’ घटनाको अनुसन्धानमा ख’टिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एक प्रहरी अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रहरीले उनीहरूबीच फोन संवाद भएको दुई वटा मोबाइल र घटनामा प्रयोग भएको छु’ ‘रा ‘पानीमा फ्या’लेको अवस्थामा फेला पारेको थियो ।
प्रहरीले कागजी रूपमा हुने गरेका तमसुक तथा लेनदेनलाई नहेर्दा समेत पछिल्लो समय यस्ता घटना बढ्न थालेका छन् । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले प्रहरीलाई लेनदेनको विषय हेर्ने अधिकार नहुँदा समेत यस्ता घटना बढेको बताए ।
‘प्रहरीलाई कागजी तमसुक र लेनदेनका घटना हेर्ने अधिकार छैन, चेक बाउन्सका घटना मात्र प्रहरीले हेर्ने हुँदा लेनदेनका घटनाबाट पनि बढेको हुन सक्छ,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने ।
लेनदेनको विषय अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र आफूले दिएको रकम सहजै फिर्ता नहुने अवस्थापछि माानिसले आ’वेगमा यस्तो निर्णयसम्म गर्ने गरेको ती प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् । यसैगरी, सामान्य वि’वादका कारण समेत परिवारभित्रकै व्यक्तिले परिवारकै व्यक्तिको ज्या’न लि’ने क्रमसमेत पछिल्लो समय बढेको छ ।
केही दिनअघि बर्दिया बाँसगढी–९ घर भएका ३६ वर्षीय अजय विकले राजधानीको अनामनगरमा आफ्नै श्रीमतीको ज्या न लि’ए ।
विकले सामान्य घरायसी वि’वादमा ३३ वर्षीया श्रीमती पार्वती खड्कालाई ‘छु ‘रा प्र”हार ग’रेका थिए । उनको सिभिल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको प्रहरीले जनाएको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारको टोलीले विकलाई सोमबार बेलुकी पक्राउ गरेको हो ।
यसैगरी, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–८ दाप्चाका ४२ वर्षीय सुदर्शन अधिकारीले गत बुधबार आफ्नै बुहारी ३७ वर्षीया रञ्जना तिमल्सिनालाई सामान्य घरायसी वि’वा’दका कारण ज्या’न लि’ए ।
काभ्रेका एसपी रविराज पौडेलका अनुसार अधिकारीले बुहारीको ज्या”न लि’एका हुन् । अनुसन्धानमा घरायसी वि’वा’दका कारण सुदर्शनले बुहारीको ज्यान लिएको खुलेको एसपी पौडेलले जनाएका छन् ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
विपन्नलाई गाउँपालिकाकाले दियो दशैँ राहत
काठमाडौ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका अतिविपन्न, गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई दशैँ
काठमाडौ । दार्चुला सदरमुकाम खङ्लगाको समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएपछि बजार बन्द गराउन नेपाली सेना परिचालन गरिएको
दशैंमा पनि सस्तोमै पाइएको छ जहाजको टिकट
काठमाडौ । कोरोना महामारीका कारण यात्रुको गतिविधि कम भएका कारण यो वर्षको दशैंमा सस्तोमै जहाजको
रचना रिमाल र प्रविन बेडवालको स्वरमा बिमल डाँगीको ‘हाम्रो माया चर्कियको’ युटुबमा भाइरल
२४ आश्विन २०७७, शनिबार १९:०१
जब भारतीले भनिन्,‘मैले करिनाको छोरा तैमुर भन्दा पनि सुन्दर छोरा जन्माउनेछु’
२१ आश्विन २०७७, बुधबार १२:४०